HERO OF MYANMAR: သူမျာဧရာဝတီမို့ငါ ဧရာဝတီကွာ ဘာဖြစ်လဲ
[10:25 |0ဦးကဆွေးနွေးသွားပါတယ်.. ]
( မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကို ယခင်အစိုးရလက်ထက် ၂၀၀၂ခုနှစ်မှစတင်ကာ စီမံကိန်းရေးဆွဲခဲ့သော်လည်း အကြိမ်ကြိမ် တိုင်းတာရေးများဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလရောက်မှသာ နှစ်နိုင်ငံနားလည်မှု စာချွန်လွှာရေးထိုးနိုင်ခဲ့ကြပါသည် ၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ရောက်မှသာ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်း၍ တိုင်းတာရေးများတရားဝင်ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ကြပါသည် ၊၂၀၀၆ ခုဒီဇင်ဘာလရောက်မှ ယခုမြစ်ဆုံစီမံကိန်းအတွက် နှစ်နိုင်ငံလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ကြပါသည် ။ နောက်ပိုင်းတွင် အသေးစိတ်တွက်တိုင်းတာမှုများ ၊ အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေခြင်းများ ၊ ဈေးနှုံးတွက်ချက်အတည်ပြုခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှသာ မြေသားလုပ်ငန်းများ စတင်နိုင်ခဲ့ပါသည် ။ ဤသည်ကိုပင် လွန်ခဲ့သော ၉နှစ်ကစတင်ခဲ့သောမြစ်ဆုံရေကာတာကြီးဟု ကျက်သရေတုံးများက ဆိုနေကြခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ )
၂၈ . ၈ . ၂၀၁၁ ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းများ
ကုလားနှင့်ဗမာ ထိုးကြိတ်ရာမှ မကျေနပ်သည့် ဒေသခံများနှင့် အာဏာပိုင်များ ထိပ်တိုက်တွေ့ click
- နေပြည်တော် တောင်ကျရေ ၂ ဦး သေ click
- NPD ရဲ့ တောင်းဆိုချက် အမှတ် (၁) click
- “လယ်သမားတွေ ကျနော့်မျက်စိရှေ့မှာပဲ ငတ်နေပါတယ်” (ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူနှင့် အင်တာဗျူး) click
- လစ်ဗျားအပြောင်းအလဲနဲ့ ရှေ့အလားအလာ (အင်တာဗျူး) click
- လူငယ်တို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး ကောင်းကင်သစ် (၃၄) (အသံလွှင့်ဆောင်းပါး) click
- ဦးသိန်းစိန်နှင့် လူစိမ်းတသိုက် (ဆောင်းပါး) click
- ဓားရိုးကမ်းလိုသူများနှင့် ကျွန်ပ်တို့၏ … (ဆောင်းပါး) click
- မြန်မာ့ရယ်သံ (ဆောင်းပါး) click
- ပုံ​​ပြောသူများ​​အဖွဲ့ (ဆောင်းပါး) click
- ယူအက်စ်စီဘီ၊ ပေါ်လစီဒါရိုက်တာနှင့် ကဗျာရေးတဲ့ ဒတ္ထ (ဆောင်းပါး) click
- တောင်ပြိုလက်ဝဲက ပို့လာတဲ့ ပေးစာ click
- မြန်မာပြည်မှာ ဖုန်းလိုင်း သန်း ၃၀ တိတိ ချပေးပြီးသောအခါ ... (ကာတွန်း) click
အိုင်ရင်း ဟာရီကိန်းကြောင့် သေဆုံးသူ ၄ ယောက်ထက်မနည်း ရှိပြီ click
- အယ်လ်ခိုင်းဒါး နံပါတ် ၂ ခေါင်းဆောင် သေဆုံး click
- စင်္ကာပူ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ ဒု-၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း အနိုင်ရ click
- လူထုပညာရေးအတွက် ချီလီသမဂ္ဂများ တိုက်ပွဲဝင် လှုပ်ရှား click
- ဒုတိယမြောက် မဟာဆုံးဖြတ်ချက် (ဆောင်းပါး) click